Ikhaya » Izindaba Zamuva » Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika » Ibhodi Lezokuvakasha Lase-Afrika Lihlala Limunye: Manje liseRwanda
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Industry Hospitality Industry • emihlanganweni • Izindaba • Izindaba ZaseRwanda • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba
Umcimbi wezokuvakasha waseRwanda
Iningi lamazwe ase-Afrika livuka ngezindaba ezibuhlungu zokuthi amanye amazwe avale uhambo lokuya emazweni athile ase-Afrika ngenxa yokuqubuka kohlobo olusha lwe-COVID-19.
Okudingwa yi-Afrika ukuthi ibhekisise ngokujulile futhi ihlanganise ngokuphelele isinqumo sayo futhi yakhe izindlela zokwenza ifa kanye nokulungisa isimo sayo ngaphakathi naphakathi kwayo isebenzisa ezokuvakasha njengomkhakha okhuthazayo ekuhlanganiseni yonke imizamo yamazwe yokudlulela ngale kwemiphumela ebhubhisayo ye-coronavirus futhi izinhlobonhlobo zayo ezihlala isikhathi eside eziqhubeka zikhula kuze kube yilolu suku.
Naphezu kwezindaba ezishaya kanzima ngenxa ye okusha kwe-coronavirus okuhlukile okubizwa ngokuthi B.1.1.529, bekunesasasa emcimbini waseRwanda njengoba abaholi bezokuvakasha bathola ukutuswa ngeqhaza labo emzamweni wokuvuselela imboni yezokuvakasha kuze kube manje.
Mayelana ne-African Tourism Board
Yasungulwa ngo-2018, i-African Tourism Board (ATB) yinhlangano ehlonishwa umhlaba wonke ngokusebenza njengomgqugquzeli wokuthuthukiswa kwezokuvakasha nezokuvakasha ukuya, ukusuka, kanye nangaphakathi kwesifunda sase-Afrika. Inhlangano ihlinzeka ngokumela okuhambisanayo, ucwaningo olunobuhlakani, kanye nemicimbi emisha kumalungu ayo. Ngokubambisana namalungu emboni ezimele nekahulumeni, Ibhodi Lezokuvakasha lase-Afrika lithuthukisa ukukhula okusimeme, inani, kanye nekhwalithi yokuvakasha nezokuvakasha e-Afrika. I-Association inikeza ubuholi kanye nezeluleko kumuntu ngamunye nangeqoqo ezinhlanganweni ezingamalungu ayo. I-ATB inweba emathubeni okumaketha, ubudlelwano bomphakathi, ukutshalwa kwezimali, ukufaka uphawu, ukukhangisa, kanye nokusungula izimakethe ze-niche. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, Chofoza lapha.